YEYINTNGE(CANADA): မာ့ခ် ဖာမနာ (Mark Farmaner) ၏ ဖြေရှင်းချက်အား သုံးသပ်ခြင်း
by Mg Mike Mike on Tuesday, July 17, 2012 at 7:21am ·
Campaign (UK) ၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သော မာ့ခ်ဖာမနာ (Mark Farmaner) ၏ ရိုဟင်ဂျာအရေး လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပါတ်သက်ပြီး BC (UK) အဖွဲ့ တိုက်ခိုက်ခံရမှုများအား ရေးသားထားခြင်းနှင့် ၎င်းတို့အဖွဲ့အား အထင်လွဲနေသည် ဆိုသည့် ဖြေရှင်းချက်စာတန်းကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ အဆိုပါ စာတန်းကို ဖတ်ရှုပြီးသည့်နောက် စိတ်ထဲမှာ အချို့သော အကြောင်းအရာလေးများ ပေါ်လာတဲ့အတွက် ချရေးဖြစ်ပါတယ်။
ပါတ်သက်၍ သံသယရှိစရာမလိုပါ၊ BC (UK) ဟာ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရးနှင့် ပါတ်သက်၍ ၎င်းတို့ ကျရာ ကဏ္ဍမှ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ သို့သော် ၎င်းတို့၏ Activities အများစုမှာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားအဖြစ် အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်နေသည့်၊ တနည်းအားဖြင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားဟု ကြွေးကျော်နေသည့် ရိုဟင်ဂျာများအရေး လှုပ်ရှားမှုများသာ ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့မြင်နေရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် များစွာရှိနေသည့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများအား အရေးတယူလှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း မရှိသည်ကို အထင်သား လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
Stateless People of Myanmar ဟုခေါ်သည့် နယ်မြေမရှိသည့် မြန်မာလူမျိုးများဟု ခေါ်ဆိုလျှင် တိုင်းရင်းသား စစ်သည် မစစ်သည် မသေခြာသော ရိုဟင်ဂျာများထက် မြန်မာပြည် အရှေ့ပိုင်းရှိ ထိုင်း၊ မြန်မာနယ်စပ်မှ ဒုက္ခသည် စခန်းများအား ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေးကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအနေဖြင့် စေတနာ မှန်ကန်ပါက မြန်မာလူမျိုး စစ်စစ်များ၏ အကျိုးစီးပွားအား ရှေ့တန်းတင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ၏ မဖြစ်ညစ်ကျယ် ပံ့ပိုးမှုကို ရရှိနေသည့် ထိုင်း၊ မြန်မာ နယ်စပ် တလျှောက်မှ ဒုက္ခသည် စခန်းများထက် ထောက်ပံ့မှု အပြည့်အ၀ ရရှိနေပြီး ၁ နှစ်လျင် ခန့်မှန်း ဒေါ်လာ သန်း ရာဂဏန်းခန့် အကူအညီများအား INGO များနှင့် ပရောဂျက် ခေါင်းစဉ်ပေါင်း မြောက်များစွာမှ ရရှိနေသည့် ရိုဟင်ဂျာများ အရေးကိုသာ ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်နေခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ကိစ္စနှင့် ပါတ်သက်ပြီး မေးစရာ ရှိလာသည်မှာ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများအား အခြားသော နိုင်ငံများ၊ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့နှင့် ဘာသာတူ နိုင်ငံများမှ နှိမ်ချ
ဆက်ဆံခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း အစရှိသည်များ ပြုလုပ်ခြင်းများစွာ ရှိနေသော်လည်း လူသိရှင်ကြား အမည်နာမ ထုတ်ဖော်ဝေဖန်ခြင်းများအား မတွေ့ရှိခဲ့ရပါ။ ဤနေရာတွင် လွန်ခဲ့သော ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ဆော်ဒီနိုင်ငံတွင် တရားရုံးမှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် ရိုဟင်ဂျာများ နေထိုင်ခွင့်နှင့် ပါတ်သက်ပြီး BC (UK) မှ လူသိရှင်ကြား ဝေဖန်ခြင်း မရှိခဲ့သည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ အဆိုပါ ကိစ္စအား The 300,000 Rohingyas in Saudi are in limbo ဆိုသည့် ဆောင်းပါးတွင်
Abdul Majid’s family moved to Saudi in 1954, two years after he was born, and was granted legal resident status as it was among the first Burmese groups to arrive. Butadecree issued two decades later forced Rohingya older than 18 who were not born in the kingdom to obtainanon-Saudi passport.
residency permits, their children cannot enrol in public schools. Mr Abdul Majid said Burmese children attend charity schools created for the
community by Saudi donors and wealthy Burmese
ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ရိုဟင်ဂျာအရေးအား ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းအများစုထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော BC (UK) သည်လည်း ဝေဖန်ခြင်း မပြုခဲ့သည်ကို မာ့ခ် ဖာမနာ အနေဖြင့် မည်သို့ ဆင်ခြေပေးမည်လည်း စိတ်ဝင်စားမိပါသည်။ အထူးသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာများ၏ လူ့အခွင့်အရေးအား နိုင်ငံပေါ်မူတည်၍ ဆောင်ရွက်လေသလောဟု သံသယဖြစ်လာပါသည်။
ကိစ္စနှင့် ပါတ်သက်၍လည်း မာ့ခ် ဖာမနာမှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောထားခြင်း မရှိပါ။ ၎င်း၏အဆိုအရ BC (UK) မှာ အကျိုးအမြတ် မယူသည့် အဖွဲ့အစည်း (Non-Government Organization) ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ သို့ဆိုလျင် NGO တစ်ခုသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းများ လည်ပါတ်နိုင်ရန် အလှူရှင်၏ လှူငွေများနှင့် လည်ပါတ်နေရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးသည်ပင် အလှူရှင်များ၏ လှူငွေများနှင့် ရပ်တည်ရသဖြင့် BC (UK) အနေဖြင့် အလှူရှင်များ၏ အလှူငွေဖြင့် ရပ်တည်နေသည်မှာ သံသယ ဖြစ်ဖွယ် မရှိပေ။ အခြားသော INGO အဖွဲ့အစည်းများကဲ့သို့ Mission များစွာနှင့် ဆင်းရဲသော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအား
ဆောင်ရွက်နေခြင်း မရှိသော BC (UK) အနေဖြင့် အလှူငွေများအား လက်ခံရရှိရန် ကြိုးပန်းရမည်မှာ အခက်အခဲတွေ့မည်မှာ သေခြာပါသည်။ သို့ဖြစ်သည့်အတွက် မည်သည့်နေရာမှ အလှူငွေများ ရရှိသနည်း ၎င်းအချက်မှာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပါသည်။
BC (UK) နှင့် ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော Rohingya Solidarity Organization (RSO) နှင့် Arakan Rohingya National Organisation (ARNO) တို့နှင့် အတူတွဲလျက် ရှိသည့် ဓါတ်ပုံများကို အထင်အရှား တွေ့လာရပါသည်။ (မှတ်ချက် ။ ။ ၀ီကီလိခ်နှင့် အခြားသော လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် RSO နှင့် ARNO တို့အား အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်မစ် အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်း၊ တစ်နည်းအားဖြင့် အန္တရာယ်ရှိ အဖွဲ့အစည်းဖြစ် သုံးသပ်ထားသည်ကို လေ့လာသိရှိနိုင်ပါသည်။) တစ်ချိန်တည်းမှာပင် RSO, ARNO နှင့် OIC တို့၏ ပါတ်သက်နေမှု သတင်းဓါတ်ပုံများကိုလည်း တဆက်တည်း တွေ့လာရသဖြင့် BC (UK) အနေဖြင့် မပြေးသော်လည်း ကံရာရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
(UK) သည် မည်သည့်ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ရခိုင်ဒေသအား ၎င်းတို့ကိုယ်ပိုင်
အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသဟု ပြောဆိုသည်ကို မကြားဘူးကြောင်း သေခြာသလော
ကိစ္စနှင့် ပါတ်သက်ပြီးလည်း မာ့ခ် ဖာမနာအား မေးစရာ မေးခွန်းများ ရှိလာပါသည်။ အထူးသဖြင့် အမေရိကန် နိုင်ငံအပါအ၀င် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး စောင့်ကြည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပါတ်သက်ပြီး တညီတညွတ်တည်း ဖော်ပြသည်မှာ အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်မစ် အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်သည် ဆိုသည်ပင်။ မကြာခင်က ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ကိစ္စရပ်များတွင်လည်း အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်မစ် အကြမ်းဖက် အဖွဲ့များ ပါဝင်ပါတ်သက်နေသည်ကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင် ၀န်ခံထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာများ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသရရှိရန် ကြိုးပန်းနေမှုများအား http://www.globalasia.org တွင် ဆောင်းပါးရှင် Thanawat Pimoljinda မှ ၂၀၁၀ မတ်လတွင် ရေးခဲ့သည် Ethno-Religious Movements AsaBarrier to an ASEAN Community တွင်
Rohingya Solidarity Organization (RSO) and the Arakan Rohingya National
Organization (ARNO) in Burma have been fighting to liberate Arakan from
Buddhist rule, with the aim of establishing an Islamic state.
Mujahid party was founded by Rohingya elders who supported jihad movement in northern Arakan in 1947. The aim of Mujihid party was to
createaMuslim Autonomous state in Arakan.
group also aimed to establish an Islamic autonomous Rakhine (Arakan) state, uniting the Rohingya people of Myanmar and Bangladesh
ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအရေးနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ဆောင်းပါးများစွာ ရေးခဲ့သည့် ဘာတီးလစ်တာနာ ဆောင်းပါးများတွင် လေ့လာလျင်လည်း
တွေ့နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်သည့်အတွက် မာ့ခ် ဖာမနာ ပြောဆိုသည့် we have never even heard any Rohingya organization saying they want their own state ဆိုသည်မှာ မုသားမျှသာ ဖြစ်ပေသည်။
အထူးအထွေ ပြောဆိုရန်ပင် မလိုအပ်သော်ငြား မာ့ခ် ဖာမနာအနေဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာနှင့် ရန်တိုက်သည့်သဖွယ် attacking her because she isaMuslim
ဟု ရေးသားလာသည့်အတွက် ဆိုရေးရှိက ဆိုအပ်ရပါတော့မည်။ ဝေနှင်းပွင့်သုံ အင်္ဂလန် လွှတ်တော်တွင် My father, my father စသည်ဖြင့် ကလေးပင်ဖြစ်သောငြား မာန်ပါပါဖြင့် ပြောကြားခဲ့စဉ်က တခဲနက် ထောက်ခံခဲ့သူများတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုး အများစုပါဝင်ခဲ့သည်ကို မေ့ထား၍ မရပါ။ ကလေးပင် ဖြစ်သော်ငြား စစ်အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်မှုအား တွန်းလှန်ရန် ၎င်း၏ ကြိုးစားအားထုတ်မှုအား မြန်မာနိုင်ငံရေးတွင် ပါတ်သက်ခဲ့သူများမှ လေးစား ချီးကျူးခဲ့သည်များမှာ ရှိခဲ့သည်မှာ သမိုင်းသက်သေ ရှိခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အမြင့်ခုန် ခဲ့ရာတွင်လည်း အားပေးခဲ့သည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများပင် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိုမှ တဆင့်တက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အငယ်စားဟု ချီးမြှောက်လာသည်တွင် မြန်မာလူမျိုးများစိတ်တွင် လက်ခံရန် ခက်ခဲလာပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီ အိုင်ကွန်ဖြစ်၍ ဒီမိုကရေစီအား မြတ်နိုးသည့် မြန်မာလူမျိုးအများစုအား ကိုယ်စားပြုသဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသာမက အခြားသော နိုင်ငံများတွင်လည်း မိမိတို့ တန်ဖိုးထား လေးစားသည့် ခေါင်းဆောင်နှင့် တစ်တန်းတည်း တင်စားလာသူများအား လက်မခံသည်မှာ အထင်အရှားပင် ရှိပါသည်။ သူမ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဖြစ်၍ မဟုတ်ပေ။
မည်သည့်ဘာသာဝင် ဖြစ်နေပါစေ အများပြည်သူ ဆန္ဒအား အတိုက်အခံ ပြုလုပ်လာပါက မည်သူ့ကိုမဆို ဆန့်ကျင်ရန် ၀န်မလေးသည်ကို ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် လူထု အုံကြွမှုကြီးများဖြင့် သိရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူပင် မည်မျှပင် အစိုးရနှင့် ပါတ်သက်နေသော်ငြား ပြည်သူလူထုနှင့် စိတ်သဘောထား မတိုက်ဆိုင်သည်ကို အတင်းအကြပ် ပြုလုပ်လာပါက ဆန့်ကျင်ခံရသည်ကို ဥပမာအနေဖြင့်
ငါးမင်းဆွေအား ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ကြခြင်းများအား လေ့လာခြင်းအားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်သည့်အတွက် ဝေနှင်းပွင့်သုံအား ဆန့်ကျင်နေကြသည်မှာ
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်၍ မဟုတ်ပဲ အများပြည်သူ သဘောထား ဆန္ဒနှင့် ဆန့်ကျင်နေ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် မြန်မာလူမျိုးများအနေဖြင့် အမှားမြင်၍ အမှန်ပြင်သူများကို ခွင့်လွှတ်ကြသည်ကို မမေ့ရန် လိုအပ်သကဲ့သို့ အမှန်ပြင်လာပါကလည်း ကြိုဆိုကြမည်မှာ မလွဲပေ။ ဝေနှင်းပွင့်သုံ၏ ဖခင်ဖြစ်သော ကိုမြအေးမှလည်း ရိုဟင်ဂျာများအား တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဟု ပြတ်ပြတ်သားသား ဆိုလာသဖြင့် ဝေနှင်းပွင့်သုံအနေနှင့် အမှားကို ပြင်လာပါက မြန်မာပြည်သူများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် မဖြစ်တော့မည်ကို သတိချပ်ဖို့ လိုပါသည်။
အကြောင်းအရာနှင့် ပါတ်သက်ပြီး အထွေအထူး ရှင်းပြရန် မလိုအပ်တော့ပေ။ မိမိ၏ ရန်ဘက်အဖွဲ့အစည်းနှင့် ပုလဲနံပ သင့်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းအား မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမျှ အဆက်အဆံ မလုပ်ချင်သည်ကို အထူးအားဖြင့် ပြောရန် မလိုတော့ပေ။ ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ပင် အခန့်မသင်ပါက အတိုက်ခံသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သာမာန် အဖွဲ့လေးဖြစ်သော BC (UK) မှာမူ ဆိုဖွယ်ရာ မရှိသည်ကို မာ့ခ် ဖာမနာအနေဖြင့် စဉ်းစား ဆင်ခြင် သုံးသပ်သင့်ပေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်သို့ အသင့်မြတ်ဆုံးသော လမ်းကြောင်းပေါ်မှ သွားနေသဖြင့် နိုင်ငံတကာ အရေးယူမှုများ လျော့ကျလာချိန်တွင်
ပြည်ပမှနေ၍ မြန်မာနိုင်ငံအရေးအား ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ရံပုံငွေ (သို့) အလှူငွေ ရရှိရန်မှာ ယခင်ကဲ့သို့ မသေခြာတော့သဖြင့် မြန်မာပြည်တွင်းတွင် အခြေစိုက်မှ ရံပုံငွေများ ရရှိမည်ကို အလွန်လူရည်လည်သည့် မာ့ခ် ဖာမနာအနေဖြင့် သိရှိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သိရှိခြင်းအားလည်း ၎င်းကိုယ်တိုင် ၀န်ခံထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ တိတ်တဆိတ် လာရောက်ခဲ့သည့် ခရီးစဉ်အား ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။
၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်နေသော အစိုးရနှင့် တိတ်တဆိတ် လာရောက်ညှိနှိုင်းရန် ကြိုးပန်းမှု ခြေလှမ်းဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ရိုးသားမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိပါက ၎င်းတို့ ခရီးစဉ်အား ထိုကဲ့သို့ လျှို့ဝှက်လာရန် လိုအပ်မည် မဟုတ်ပေ။ အဆိုပါ ခရီးစဉ်အတွင်း ၎င်းတို့အား ရိုဟင်ဂျာများနှင့် ပါတ်သက်မှုများကို မေးမြန်းခံခဲ့ရခြင်းမှ အစပြု၍ ထိတ်လန့်လာခဲ့သဖြင့် အဆိုပါစာအား ထုတ်ဖော်ရေးသားခြင်းအား On my recent trip to Burma, even very senior democracy leaders in Rangoon talked about it. ဟု ရေးသားထားသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။
မာ့ခ် ဖာမနာအနေဖြင့် အင်္ဂလန်တွင် ရုံးစိုက်၍ မြန်မာနိုင်ငံအရေးများအား ဆက်လက် လုပ်ကိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်သည်ကို သိရှိလာသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် ဆက်လက်ရုံးစိုက်နိုင်ရန် ကြိုးပန်းနေချိန်တွင် ၎င်းတို့ အရေးမထားခဲ့သည့် အွန်လိုင်းမှ အသံများကြောင့် ၎င်းတို့ အလေးထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံရေးတွင် ပါတ်သက်နေသည့် သူများ၏ အရေးတယူ မေးမြန်းမှုများကြောင့်
အထင်မြင်လွှဲမှားနေမှုများအား ဖြေရှင်းချက် တစ်ခုအနေဖြင့်သာ မှတ်ယူရပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် မတတ်သာ၍ လျှောက်လဲချက် ပေးခြင်းသာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့လုပ်ရပ်အား ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးစားနေခြင်းများကို အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်များအား လေ့လာခြင်းဖြင့် သိရှိနိုင်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အနေဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံနှင့် ပါတ်သက်ပြီး လုပ်စားလာကြမည့် နိုင်ငံရေးလုပ်စားများအား သတိထားရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းတို့ လှည့်ကွက်အတွင်း မ၀င်ရောက်မိစေရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
Very good post, totally agree with you, the name should be ဘင်္ဂလီကန်ပိန်း(ယူကေ),
၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်မင်းကိုနိုင် အရေးေ...
ဒုတိယသမ္မတ အမည်စာရင်းကို ထပ်မံတင်သွင်းရန် တပ်မတော် ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု အဆို...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကို...
မြန်မာအပေါ် စီးပွားပိတ်ဆို့ မှု လျော့ပေးခဲ့တဲ့ထဲ အေ...
နိုင်ငံရေးပြစ်မှုလို့ လူသိများတဲ့ ပုဒ်မ ၅ည ဖျက်သိမ...
ခဏခဏ အသတ်ခံရတယ် ၊ ဘယ်တော့မှ မသေဘူး ။
စစ်တွေမှာ -GTC- ကျောင်းသူများ အကြမ်းဖက် ဘင်္ဂလီတွေရဲ...
ဥက္ကဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်း မရှိပဲ ...
စစ်တွေ နည်းပညာ ကောလိပ် ကျောင်းသားများ တိုက်ခိုက်ခံ...
Ultimate Stick Fight v1.2 Apk Game 21MB